Geeri Naxdin Leh: Yuusuf Maxamed Sugaal [Yuusuf Dheere] – Rasaasa News
Jijiga, August 24, 2014 – Maamulka RasaasaNews, wuxuu tacsi u dirayaa Qoyska iyo Qaraabadda uu ka baxay kornayl Yuusuf Maxamed Sugaal [Yuusuf Dheere] oo shil gaadhi oo ka dhacay Jijiga ku geeriyooday.
Waxaanu Eebe wayne uga baryaynaa in marxuun Yuusuf Maxamed Sugaal Janadii geeyo, samir iyo Iimaana ka siiyo Qoyskii iyo Eheladii uu ka geeriyooday.
Kornayl Yuusuf Maxamed Sugaal, waxaa uu ka mid ahaa saraakiishii ciidamadii Soomaaliya. Waxaa kale oo uu ahaa taliyihii qaybtii Duufaan ee Jabhadii Soomaali galbeed ee dagaalka la gashay Atoobiya sanadihii 1977/8.
Yuusuf Maxamed Sugaal waxaa uu ka mid ahaa dadkii ka qaybqaatay abaabulkii Jabhadii Somali galbeed, waxaana uu kolkii dambe isgaga tagay shaqada dawlada si uu uga qabgalo hogaamintii ciidamadii Jabahadii Soomaali galbeed.
Kornayl Yuusuf, waxaa uu ahaa dadkii sida wayn uga soo horjeedsaday siyaasadii Soomaaliya ee ka qayb galaan dagaalkii Soomaali galbeed. Wuxuu aaminsanaa in Jabhada Soomaali galbeed ka madax banaanato Soomaaliya, marka laga reebo in ay taageero siiso Jabhada.
Kolkii uu dhamaaday dagaalkii Soomaali galbeed Yuusuf, waxaa lagu xidhay Muqdisho, arimo la xidhiidh aaminaadiisa la xidhiidha gobonimodoonka Soomaali galbeed, halkaas oo xidhnaa muddo saddex sano ah.
Eebe ha u naxariistee Kornayl Yuusuf Maxamed Sugaal, waxaa uu ahaa halgamaa aaminsan in mar uun ay xornimo heli Soomaali galbeed.
Kornayl Yuusuf Maxamed Sugaal [Yuusuf Dheere, 20-kii sano ee ugu dambeeyey wuxuu ku noolaa dalka Ingriiska. Dhawaan buu yimid magaalada Jijiga oo ay joogaan ehelkiisu, halkaas oo dhaacaankiisu yaalay.
Yuusuf Maxamed Sugaal wuxuu ahaa gabyaa murti maal ah oo af Soomaaliga aad yaqaan.
Eebow u naxariiso marxmuum Yuusuf Maxamed Sugaal.